Maaliyada Kooxda Barcelona oo laga mamnuucay in lagu xirto Sacudi Carabiya - Qotoqoto
Posted on June 11, 2017 by qotoadmin
Xayiraada lagu hayo dalka Qadar ayaa gaaray heer aad u sareeya iyadoo haatan lugaha la gashay arrimaha ciyaaraha,waxaana boqortoyada Sacudi Carabiya ay soo saartay sharci ka mamnuucaya shacabka ku nool dalkeeda inay xirtaan maaliyada ay ku ciyaarto naadiga Barcelona maadaama uu ka muuqdo magaca shirkada diyaaradaha ee Qatar Airways.
Inaad ku xirato maaliyada Barcelona magaalooyinka Sacudi Carabiya waxaa lagugu ganaaxayaa lacag gaareysa £120,000 iyo weliba xarig 15 sano ah sida ay qortay DailyMail.
Xiisada ka jirta Khaliijka ayaa ee u dhexeysa dalka Qatar iyo wadamada ka soo horjeeda ayaa saameyn ku yeelatay haatan meel walba iyadoo hore dowlada Sacudi Carabiya ay ku dhowaaqday in ganaax iyo xarig uu mutaysanayo qofkii lagu arko isagoo daawanaya taleefishinka Aljazeera.
Barcelona ayaa afartii sano ee la soo dhaafay waxaa maalgelin ay ka helaysay shirkada Qatar Airways balse waxaa la filayaa in dhamaadka sanadkan uu ku soo gabagaboobo heshiiskooda.
Maaliyada uu xirto laacibka reer Argentina ee u ciyaara Barcelona Lionel Messi ayaa ah tan caalamka ugu iibsiga badan leh maadaama ciyaartiisa dad badan ay aad u xiiseeyaan.
Previous PostPrevious 8 die as refugee boat capsizes in Mediterranean
Next PostNext Donald Trump’s state visit to Britain put on hold